SoapUI: Qalabka Insider ee la shaqeynta API-yada | Martech Zone
SoapUI: Qalabka Insider ee la shaqeynta API-yada
Isniin, Maarso 4, 2013 Khamiis, Maarso 7, 2013 Douglas Karr
Waxay umuuqataa markasta oo aan la kulmo saaxiib fiican, waxaan maqlaa qalab cusub oo nolosha fududeynaya. Waan la qaxweeyay David Grigsby, bahal isdhexgalka .NET ee u shaqeeya DocuSign. David iyo waxaan ka wada hadlaynay SOAP (Protocol Helitaanka Ujeedo Sahlan) oo ka soo horjeedda REST APIs (waa sida aan u rogo). Waxaan u jiheystaa REST APIs maxaa yeelay way ka sahlan yihiin aragtideeda iyo horumarinteeda goos gooska markiiba - iyo sidoo kale arrimaha dhimista ee sugida. David, oo ah .NET guru, wuxuu jecel yahay SOAP maaddaama ay bixiso hawlgallo aad u adag iyo fursado.
David wuxuu ii sheegay sirta gudaha ee la shaqeynta barnaamijyada barnaamijyada SOAP (APIs)… SoapUI. (PS: Waxay umuuqataa riyadeyda ah an APUI laga soo bilaabo 2006 maalin maalmaha ka mid ayaa laga yaabaa inay gaarto!)
SoapUI waxay ku timaadaa laba nooc, Open Source iyo Pro. Nooca Pro wuxuu kuu ogolaanayaa inaad sameyso wax kasta oo Furan Furan sameeyo, laakiin wuxuu ku darayaa farabadan wax soo saar iyo astaamo waqti-badbaadin ah $ 349 ruqsad kasta.
Tilmaamaha iyo Tifatirayaasha Foomka ee indho indheynta xogta - In kasta oo Tifatiraha Guud uu soo bandhigayo aragti guud oo ku saabsan xogta dhabta ah ee farriimaha XML, Tifatiraha Foomku wuxuu bixiyaa is-dhexgal fudud oo lagu galayo xogta codsiyada. Labada tifaftire ee wadajirka ah ayaa ka dhigaya tijaabadaada mid dhakhso badan oo fudud.
Ilaha xogta - soo dhoofso ilaha xogta aad rabto inaad tijaabiso. Dhammaan qaababka waaweyn waa la taageeraa, oo ay ku jiraan feylasha qoraalka, XML, Groovy, Excel, Tusaha, JDBC (Xogta Xiriirka), iyo ilaha xogta 'Grid Internal'.
Tijaabi oo Guji Tijaabada - habab si loo fududeeyo abuurkaaga tijaabada adigoo u oggolaanaya u adeegsiga si dhakhso ah u adeegsiga jiita iyo hoos u dhigida.
Xaqiijinta XPath Match Abuuritaanka caddayn waxaa lagu sameeyaa dhowr tallaabo iyo ilbiriqsiyo fudud.
Caymiska - fiiri sida saxda ah inta adeeg ee aad tijaabisay? Tani waxay kuu oggolaaneysaa inaad aragti guud hesho oo aad aragto aagagga waxqabad ee sifiican loo tijaabiyay iyo meelaha laga yaabo inaad rabto inaad waqti badan la qaadato. Waxaad sidoo kale qodan kartaa xitaa intaa ka sii dheer oo aad si sax ah u tilmaami kartaa waxa aan la tijaabin iyo qeybaha aan la xaqiijin.
Tijaabinta amniga - waxaa jira weeraro badan oo kuwa halista ah ay ku tuuri doonaan, sida: bambooyin XML ah, irbado SQL ah, XML cillad leh, fuzzing, iskutallaabta goobta iwm. Generator Tijaabiyaha Amniga ee Pro wuxuu kuu ogolaanayaa inaad sameysid baaritaan dhameystiran oo nugul ah. .
Shuruudaha - Taageerada shuruudaha SoapUI Pro waa muuqaal aad u faa'iido badan oo ku saabsan khariidaynta tijaabooyinkaaga ka soo horjeedka shuruudaha ganacsiga ama farsamada.
Diidmada - lagu xaliyay ficil fudud oo ah "goobid-iyo-badal" -ooca nooca ah.
Dhise SQL - waxay kaa caawineysaa inaad abuurto bayaannada SQL ee leh muuqaal garaaf ah, taasoo sahleysa helitaanka xogta qof walba.
Warbixinta - soo saar warbixinno faahfaahsan oo ku saabsan Mashruuca, TestSuite, TestCase, ama heerka LoadTest. Daabac ama u dhoofi nooc kasta oo istaandar ah, oo ay ku jiraan PDF, HTML, Word iyo Excel, adna u habee.
Taageerada - qayb ka mid ah liisanka waxaad sidoo kale heli doontaa hal sano oo taageero ah oo aad haysato liisankaaga.
Tags: APIbaaritaanka apiqalabka barnaamijkanasashonaso apisaabuunqalab saabuunqalabXML
Douglas Karr Monday, March 4, 2013 Thursday, March 7, 2013
Xidhitaanka Farqiga U Dhexeeya Iibka iyo Suuqgeynta
Sida loo qoro Tweet kaamil ah
Mar 11, 2013 at 6: 16 AM
Waad ku mahadsantahay dhajinta tan, Doug. Waxaan u adeegsaday labada waji ee horumarinta macaamiisha. SOAP waxay umuuqataa mid ka dhib badan in lala shaqeeyo marka la barbardhigo REST sababo la xiriira ku tiirsanaanta qaabdhismeedka XML. SoapUI runtii waxay ka dhigi kartaa SOAP xanuun aan badnayn in kastoo though oo iyagu waxay leeyihiin rakibayaal Mac ah! Waan hubin doonaa.
Xitaa aalad weyn oo sidan oo kale ah in kastoo, waxaan u maleynayaa inaan wali doorbidayo casriga casriga ah ee loo yaqaan 'RESTful APIs'. Taasi waa sida aan u rogo 🙂
Mar 11, 2013 at 7: 58 AM
Anigu waan kula jiraa @ twitter-33588968: disqus! Laakiin waan ku qancay qalabkan - wuxuuna ku shaqeeyaa RESTful APIs sidoo kale.
David W Grigsby
Mar 24, 2013 at 11: 13 AM
Maaddaama ay yiraahdaan marwalba waxaa jira waqti la qaxweeyo saaxiib wanaagsan iyo karti wadaagga aqoonta ku habboon. Waad ku mahadsantahay Doug qaylada iyo awooda aan ku wadaagno waxa aan labadeenaba jecel nahay oo aan u leenahay xamaasad weyn. Sidoo kale waxay qabataa wicitaanada 'REST' iyo sidoo kale inaad hoosta ka tilmaamtay waana sababta ay u tahay aaladdayda khaladka iyo soo saarista qalabka 'API'. Waan ku arki doonaa bisha Abriil markaan ku soo laabto magaalada 🙂